Want to getafresh perspective on मृत्यु? Explore Sadhguru’s wisdom and insights through articles, videos, quotes, podcasts and more.
'मत्यु' जान्नको लागि पहिला जीवनलाई जान्नुहोस् !
मृत्यु निकै रहस्यमय छ । सद्‌गुरु, यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि मृत्यु यस्तो कुरा हो, जसलाई मनले बुझ्न सक्दैन— जीवनका सम्पूर्ण आयामहरूलाई गहिराइमा जान्न सकियो भनेमात्र मृत्युलाई जान्न सकिन्छ ।
मानव जनसङ्ख्याको बिस्फोट— एकमात्र मूलभूत समस्या !
जुलाई ११ मा विश्व जनसङ्ख्या दिवस पर्दछ । अहिले हामीहरूले सामना गर्नुपरेको मूलभूत समस्या विशाल जनसङ्ख्या भएको कुरा उल्लेख गर्दै सबैजना मिली सचेतनपूर्वक मानव जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन र कम गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्नुभएको छ ।
जीवित छँदै 'मृत्यु' लाई बाँच्नुहोस् !
यस नवीनतम लेखमा नयाँ वर्षको स्वागत गर्दै, सद्‌गुरु, हामीलाई जीवनको एकमात्र निश्चित पक्ष अर्थात् मृत्युसँग बढी निकट सम्बन्ध राख्नको लागि पुनः स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ । भलै, हामीले मृत्युलाई एकदमै भयानक रूपमा बुझ्दै आएका भएपनि, सद्‌गुरुले यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि श्वास लिने र श्वास छोड्ने जसरी हामीले जीवन र मृत्यु दुवैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । कसरी सही विकल्प रोज्ने र आफ्नो अस्तित्वमा कसरी चम्किने भनेर उहाँ मार्गदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ । जीवित छँदै मृत्युलाई बाँच्नुभयो भने, यस धरतीमा कसरी समय बिताउने भन्ने सन्दर्भमा तपाईं एउटा फरक सम्भावना रचना गर्नुहुन्छ ।
'मृत्यु' सम्बन्धी पुस्तक— ती सबैका निम्ति, जो एकदिन मर्नु पर्नेछ !
विश्वका अधिकांश समाजहरूमा मृत्यु वर्जित विषय बनेको छ । तर, कतै हामीले मृत्युलाई पूर्णतया गलत रूपमा पो बुझेका छौँ कि ? मृत्युलाई जुन रूपमा महाविपत्ति भनेर चित्रित गरिएको छ, यो त्यसो नभएर हाम्रो जीवनको मूलभूत पक्ष पो हो कि ? मुक्तिको लागि आध्यात्मिक सम्भावना पो हो कि ?
महासमाधि— यो तपाईंको निम्ति पनि सम्भव छ !
महासमाधि भनेको के हो ? आध्यात्मिक साधकहरूको निम्ति सबैभन्दा उच्च रहेको यो लक्ष्य के तपाईंको लागि सम्भावना बन्न सक्दछ ? यसको लागि सही प्रेरणा र उचित मार्ग के हो ? यसलाई आफ्नो निम्ति कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ ? अनि, कस्तो किसिमको साधनाले हामीलाई त्यो अवस्थामा पुऱ्याउँछ ? यस्तै-यस्तै प्रश्नहरूलाई सद्‌गुरुले यो स्पटमा सम्बोधन गर्नुभएको छ । साथै, सद्‌गुरुले यतिसम्म भनिरहनु भएको छ— "जब तपाईंको लागि जाने समय आउँछ, म यो सुनिश्चित गर्नेछु कि तपाईं यहाँबाट राम्रोसँग जानुहुनेछ । यो एउटा वाचा हो ।"
प्रज्ञा— 'मृत्यु' भन्दा परको कुरा जान्ने एकमात्र तरिका
जीवन र मृत्युको मूलभूत प्रकृतिलाई केलाउँदै, सद्‌गुरु, हामीलाई यो बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि जीवन र मृत्यु एउटै र उही हुन् । सद्‌गुरु, यो उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ कि मृत्युभन्दा पर के छ भनेर जान्ने एकमात्र तरिका हो, प्रज्ञा— कुनै पनि चीजको बारेमा नसोचिकनै तिनलाई जान्ने तरिका ।
वनप्रस्थ— आफ्नो नश्वर (मरणशील) प्रकृतिप्रति सचेत हुने तरिका
वनप्रस्थ यस्तो परम्परा हो, जहाँ आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणतिर व्यक्तिले सम्पूर्ण सांसारिक कामहरूबाट हात झिकेर वन (जङ्गल) मा गएर जीवन बिताउँछन् । कसरी जङ्गलमा बस्नाले तपाईंको मृत्यु सहज हुन्छ ? साथै, के यो परम्परागत विधि अहिलेको समयमा पनि प्रासङ्गिक छ ? आउनुहोस्, सद्‌गुरुमार्फत जानौँ...
के पूर्वजन्मले अहिलेको शरीर वा स्वरूप निर्धारण गर्छ ?
हामी जुन स्वरूपमा जन्मिन्छौँ, त्यो कसरी निर्धारित हुन्छ ? के हामीले कुन गर्भमा जन्म लिने भनेर रोज्न सक्छौँ ?
के मृत्युपछि पनि जीवन हुन्छ— पुनर्जन्म हुन्छ ?
जीवन, मृत्यु र मरणोपरान्तको जिज्ञासाको बारेमा थुप्रै बहलाउने जवाफहरू सुझाइएको छ । योगी एवं दिव्यदर्शी, सद्‌गुरु, व्यक्तिको मृत्यु भएपछि वास्तवमा के हुन्छ भन्ने बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ ।
जब हामी आफ्नो प्रियजन गुमाउँछौँ, तब हामी प्रायः दुःख र अवसादमा डुब्छौँ । सद्‌गुरु, बताउँदै हुनुहुन्छ कि यो पीडा र डिप्रेशनमा जाने समय नभई ती व्यक्तिले हाम्रो जीवनलाई जुन रूपमा समृद्ध बनाएका थिए, ती यादहरूलाई स्मरण गर्दै धन्य हुने समय हो ।
के तपाईंलाई आत्महत्या गर्ने अधिकार छ ?
हरेक दिन पत्र-पत्रिकाहरूमा आत्महत्या गरिएको वा त्यसो गर्ने प्रयास गरिएको खबरहरू छापिएका हुन्छन् । आर्थिक सङ्कटले गर्दा, भावनामा उथलपुथल हुँदा अरू जुनसुकै कारण भएपनि, के आत्महत्यालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ ? सद्‌गुरु, यसलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ।
आध्यात्मिक दीक्षा— वंशाणुगत प्रभावबाट मुक्त हुनको निम्ति
हाम्रा मृत पुर्खाहरू कसरी हामीमार्फत ″बाँच्दछन्″ अनि कसरी विभिन्न प्रकारहरूले हामीमा प्रभाव पार्छन् भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै, सद्‌गुरु, वंशाणुगत स्मृतिबाट मुक्त हुनको लागि चलिरहने संघर्ष साथै "संस्कार" को बारेमा गहिराइमा बताउँदै हुनुहुन्छ ।
मृत्यु अवश्यम्भावी छ, तर केही व्यक्तिमा मात्रै शालीनता पूर्वक मृत्यु बहन गर्ने सौभाग्य हुन्छ । मृत्युको नजिक पुगेको व्यक्तिलाई शन्तिपूर्वक जानको लागि के-कस्तो तयारी गर्न सकिन्छ अनि मृत्युपछि हुने शोकबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा सद्‌गुरु चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ ।
मृत्युको अन्तिम क्षण— आध्यात्मिक विकासको अवसर
मृत्युको समय शान्तिपूर्ण वातावरण सृजना गर्नु हाम्रो परम्परा रहेको छ । के मृत्युको अन्तिम क्षणले मर्ने व्यक्तिमाथि केही प्रभाव पार्दछ ? के यो क्षण उसको अर्को जन्मसँग जोडिएको हुन्छ ? योगी एवं दिव्यदर्शी, सद्‌गुरु, मृत्युको प्रक्रियालाई नियाल्ने क्रममा यो बताउँदै हुनुहुन्छ कि मृत्युको अन्तिम क्षणमा सचेत रहिरहन सकियो भने, त्यो आध्यात्मिक विकासको निम्ति सोपान बन्न सक्दछ ।
Read more Sadhguru's Wisdom on मृत्यु
Read more articles from Isha on मृत्यु